एक हप्तामै विदेशमा ५४४ नेपाली सङ्क्रमित, एकको निधन - VOICE OF NEPAL
एक हप्तामै विदेशमा ५४४ नेपाली सङ्क्रमित, एकको निधन
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:५८
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी दोस्रो छाल शुरु भएयता थप दुई देशका नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता अष्ट्रिया र चेक रिपब्लिकमा रहेका नेपालीमा सङ्क्रमण देखिएको हो । सङ्घका अनुसार विश्वभर ४४ देशमा रहेका नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिका अनुसार, यो साता विदेशमा रहेका थप एक हजार १६३ जना नेपालीलाई कोरोनामुक्त भएका छन् भने थप ५४४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाका अनुसार, विदेशमा ४४ हजार ११३ जना नेपाली कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका छन् । तीमध्ये ४० हजार ७२८ जना अर्थात् ९२ प्रतिशत नेपाली कोरोनामुक्त भएका छन् । यो साता स्पेन, नेदरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, अष्ट्रिया रहेका नेपालीमा थप कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार, यो साता साउदी अरबमा थप एकजना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । सङ्घका अनुसार, विदेशमा १८ देशमा २८५ जना नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो साता नेपालमा मात्र एक लाख ९१ हजार ६३६ जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने तीमध्ये एक लाख ५५ हजार ११४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेहरुको सङ्ख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । शनिबार साँझसम्म नेपालमा एक हजार ८७ जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ ।
डेनमार्कमा नेपाली बिद्यार्थीले जिते १९ लाख पुरस्कार !
कश्मीरमा भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपाली मारिए !
चितुवाको छाला सहित भारतमा एक नेपाली पक्राउ !
नशालु पदार्थ खुवाई भारतमा नेपाली लुटिए
ग्लोबल गोरखा समाजको राहत कार्यक्रम अन्तिम चरणमा
हङकङमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी: ७ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन अवलोकन गर्न काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा अमेरिकामा !
शितलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको ‘लञ्च मिटिङ’ : के भयो छलफल ?
७० वर्षीय बुबाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन